Farmaajo oo Cumar Filish u magacaabay guddoomiyaha Gobolka Banaadir
Cumar Filish oo loo magacaabay gudoomiyaha Gobolka Banaadir
WARIYAHA MUQDISHO GAROWE ONLINE
Posted On 22-08-2019, 06:19PM
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho u magacaabay Cumar Maxamuud Maxamed [Filish].
Madaxweynaha ayaa faray Guddoomiyaha Cusub ee Gobolka in uu sii dhammeystiro qorshayaashii horumarineed iyo waxqabadkii muuqday ee Guddoomiyihii hore, Alle ha u naxariistee, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan [Eng.Yarisow].
“Anigoo xeerinaya baahida loo qabo in guddoomiye uu yeesho Maamulka Gobolka Banaadir, si loo sii amba qaado qorsheyaashii horumarineed ee socday, sidoo kalena tixgelinaya soo jeedinta kala duwan iyo waayo-aragnimada uu Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) uu u leeyahay gudashada waajibadka xilkan ayaan ugu magacaabay.”
Farmaajo ayaa u rajeeyay Filish in uu Eebe u fududeeyo masuuliyadda culus ee loo igmaday, isagoona kula dardaarmay in uu si hufan oo daacadnimo iyo wadaniyad leh ugu adeego bulshadeenna.
Marxuum Yariisow ayaa bishii hore u dhintay dhaawac kasoo gaarey weerar ay Al-Shabaab ku qaadey xarunta gobolka Banaadir, halkaasi oo mas'uuliyiin kale lagu khaarijiyey.
Sidda ay sheegeen laamaha amniga, weerar kamid ahayd shaqaalaha gobolka ayaa fulisay is-miidaaminta oo ka dhacday hoolka shirarka ee xarunta gobolka Banaadir.
Magacaabidan ayaa waxay kusoo beegmeysaa iyadda oo isbedel lagu sameeyay taliyeyaasha Ciidamadda Qalabka, kuwaasi oo loo magacaabay hogaan cusub. [Halkan ka akhriso]
Cali Filish, marka dib loo eego taariikhdiisa, ayaa waxa uu soo noqday Xildhibaan si lamid ah waxa uu kamid ahaa hogaamiye kooxeedyadii waddanka soo maray.